Ndekọ maka iMovie na Igwefoto Weebụ na Igwe Igwe Dị Iche Iche | Martech Zone
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na posts Martech Zone dị ka azụmaahịa na ndị mmadụ n'otu n'otu na-etinye usoro atụmatụ vidiyo iji wuo ikike na ntanetị yana draịva na-eduga na azụmaahịa ha. Mgbe iMovie nwere ike ịbụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu nyiwe maka edezi vidiyo n'ihi na nke ala nke iji, ọ bụghị otu n'ime ihe ndị kasị siri ike video edezi nyiwe.
Na, anyị niile maara na ịdekọ ọdịyo site na igwefoto laptọọpụ ma ọ bụ kamera kamera bụ omume jọgburu onwe ya ka ọ na-eburu ụdị mkpọtụ enweghị isi. Inwe igwe okwu di egwu ga eme ihe di iche na vidiyo gi. N'ọfịs m, m na-eji ihe Audio-Technica AT2020 Cardioid Condenser Studio XLR Igwe okwu jikọọ na a Behringer XLR na USB Nga-nkwupụta ụda. Ọ na-amịpụta ọgaranya ọdịyo na mkpọtụ mkpọtụ ọ bụla dị ka ọ dị kilomita ole na ole.
Maka vidiyo m, enwere m Logitech BRIO Ultra HD kamera. Ọbụghị naanị na ọ na-edekọ na 4k, o nwere ọtụtụ mgbanwe ndị enwere ike ịme vidiyo ka ọ dị mma-gbanye ya na gburugburu gị.
iMovie anaghị akwado igwe foto dị iche na isi iyi!
iMovie dị oke - na-enye gị ohere ịdekọ site na FaceTime site na igwefoto ngwaọrụ gị. Ọbụna njọ, ịnweghị ike ịdekọ site na ngwaọrụ ọdịyo dị iche… nke jọgburu onwe ya.
Ma ọ bụ ị nwere ike?
Ecamm Live Virtual Camera Na-eme!
Iji ụfọdụ ịrịba software akpọ Ecamm Ndụ, ọ bụ kpamkpam kwere omume. Ecamm Live na - enyere gị aka igbanye igwefoto igwefoto na OSX nke ị nwere ike iji n'ime iMovie dị ka isi iyi.
Enwu ọkụ Ecamm Ndụ ma ị nwere ike gbanwee ntọala vidiyo gị niile, tinye ihe mkpuchi, ma depụta ngwaọrụ ọdịyo gị… na nke a, ana m atụ ya na Behringer XLR m na USB preamp nke igwe okwu igwe Technica m jikọtara.
Ozugbo i nwere gị video na ọdịyo otú ị chọrọ ya, pịa Bubata Video si Camera (ala akụ) button na iMovie:
Ma nke ahụ bụ ya… ugbu a ị nwere ike dee gị video ozugbo gị iMovie oru ngo site na-ahọpụta ndị Igwefoto Ecamm Live Virtual dị ka isi iyi!
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji vidiyo na ọdịyo gị dị njọ, Ecamm Live bụ ihe dị mkpa! Banyere naanị ihu ala bụ na ahụrụ m ụfọdụ ngwa, dịka Microsoft Teams, amataghị ya dị ka igwefoto… mana ekwenyere m na nke a bụ okwu Microsoft na ọ bụghị okwu Ecamm Live.
Zụta Ecamm Live Taa!
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ njikọ m maka ngwaike ngwanrọ na Ecamm Live sọftụwia n'oge edemede a.
Tags: 4k kameraapụlteknụzụ ọdịyobehringerEcamm ndụeziokwufacetimeiMovielogitech brioKamera Logitech BRIOokwumicrosoftOSXndekọ vidiyoshure igwe okwuNkechiigwe okwu xls
Etu ị ga - esi bido Podcast maka azụmaahịa gị (yana nkuzi a mụtara n'aka m!)
Jul 21, 2021 na 11:15 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ọkwa a dị ịtụnanya, Douglas! Enwere m ike iji nke a na ndekọ m n'ọdịnihu. Tupu, M na-Ndekọ eji record-screen.com n'ihi na m na-amaghị ihe bụ ihe kasị mma ngwá ọrụ ka ịdekọ vidiyo dị ka fim na na webcam. A ọjọọ bụ na m amaghị otú e si eji iMovie. Mana ekele dịrị gị, m ga-agbaso ntuziaka gị. Daalụ nke ukwuu!
Sep 4, 2021 na 1: 27 AM
Ecamm na -ada ka ezigbo sọftụwia, mana ịnye ọnụahịa bụ naanị ihe ọchị. Dollar 16 kwa ọnwa maka ụdị dị ọnụ ala karịa bụ nzuzu.
Sep 9, 2021 na 2:07 PM
Na nkwanye ugwu, ekwetaghị m ma chee na ọ bara nnukwu uru. Ha dịkwa oke mma maka ijigide mgbanwe ọdịyo na vidiyo niile na OSX. Naanị 2 cents m.